शेयर बजारमा ३ दशमलव २९ अंकको गिरावट
काठमाडौं, पुस १७ : बुधबार ९ दशमलव २२ प्रतिशतको वृद्धि भएको होटल समूह बिहीबार भने ३ दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ। बैंकिङ्ग समूहमा ० दशमलव २१ प्रतिशतको गिरावट रहेको छ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक ३ दशमलव २९ अंकले घटेर ११६६ दशमलव २१ को विन्दुमा बन्द भएको छ। दोस्रो बजार ० दशमलव २८ प्रतिशतले घटेको छ। दोस्रो बजार ११६९ दशमलव ९४ को विन्दुमा खुलेको थियो भने ११७१ दशमलव ७३ को उच्च विन्दुसम्म पुगेको थियो।
बजारको न्यून विन्दु ११६५ दशमलव २५ रहँदा ५३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम भने बढेको छ।
आज सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्ट्सको शेयर किनबेच भएको छ। शिवम् सिमेन्ट्सको ९ करोड २१ लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
आज जोशी हाइड्रोपावरका शेयरधनीले सर्वाधिक ८ दशमलव ३३ प्रतिशतले कमाए भने एचआईडीसीएलका शेयरधनीले सर्वाधिक ७ दशमलव ५८ प्रतिशतले गुमाए।
केही समयदेखि बजारको तत्कालीन प्रतिरोध ११७५ र तत्कालीन सामान्य टेवा ११६० मा रहेको देखिएको छ भनिएको थियो। आज पनि बजार यही क्षेत्रभित्र सीमित रहेर उतारचढाव भएको छ। नेप्से परिसूचक ११६६ दशमलव २१ को विन्दुमा बन्द भएको छ।
चित्र नं १ मा दैनिक मैनबत्ती विश्लेषण अनुसार हाल बजारले मुख्य प्रतिरोध क्षेत्रलाई सामना गरिरहेको देखिन्छ। आजको मैनबत्तीले वियरिस मैनबत्ती बनाएको छ। परिमाणले आज लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढेको संकेत गरेको छ।
चित्र नं. २ मा, दुई दिनको कारोबार कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई पाँच मिनेट समयावधिको मैनबत्तीलाई प्रयोग गरिएको छ। अघिल्लो दिन प्रवृत्तिहीन रहेको बजार आज टेवा क्षेत्रमा बन्द भएको छ। आज २१ र ५० समयावधिको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)हरुले दिएको संकेत प्रभावकारी देखिँदैन।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ३८ दशमलव ०६ अंकमा रहेको छ। कारोबारको अन्तिम समयमा स्टोकास्टिक अक्सिलेटरले बजारमा शेयर बढी विक्री भएको संकेत गरेको छ।
निष्कर्ष : छोटो समयावधिको बजारको प्रवृत्ति र सूचकलाई समग्रमा हेर्दा यदि बजार ११८२ भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार केही सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ र अर्को तत्कालीन प्रतिरोध क्षेत्र १२०० मा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै, यदि बजार ११६० भन्दा तल स्थिर रहेमा बजार केही नकारात्मक पक्षमा हुन सक्ने संकेत गर्दछ र अर्को तत्कालीन टेवा ११५० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ।
Published Date: Thursday, 2nd January 18:08:53 PM
शेयर बजार २ दशमलव ४२…
आज शेयर कारोबारको अन्तमा क्रेता…
शेयर बजारमा फेरि विक्रेता हाबी
शेयर बजारमा आयो रौनकता, के होला अब ?
शेयर बजारमा सस्तिँदै कम्पनीको मूल्य, अब के होला ?
नेप्सेका सबै उपसूचकमा गिरावट
तीन दिन लगातार बढेको शेयर फेरि घट्यो
शेयर बजार १६०० अंकभन्दा माथि, अब के होला?
शेयर बजार केही सच्चियो, तीन अर्ब ४१ करोड बढीको कारोबार